Ezemidlalo Ukufaneleka, Ukulwa
On ithelevishini, babonakala engenangqondo, uhlobo funny tolstyachki e amabhandeshi. Lokhu kubenza bathandeke kakhulu ephakanyiswe umlenze, kwenza imisindo abangayiqondi kahle, bese ubambe nomunye futhi bafuna ukusola. Mhlawumbe, umuntu ngamunye, ngezinye izikhathi lurks ezemidlalo isiteshi, Ngacabanga ukuthi Sumo - lokhu akuwona umdlalo, kunalokho, kumnandi, kumnandi ngoba izibukeli. Kodwa kwazi bani ukuthi mizwelo emoyeni kulezi izenzakalo nje indlela yokufunda kanye kubalulekile ukuqonda ifilosofi ukulwa ukufinyelela ezindaweni eziphakemeyo! Futhi iyini Isisindo esivamile wrestling sumo? Impela ngabe kufanele kube ngaphezulu noma kuba ngemibono?
Japan kubonakala wasenta saba live amasiko ezijabulisayo, zezinkambi eziningi, nesineke yokudla irayisi ngezinti, ezweni abesifazane eqashisayo, ngubani umuntu eguga ungatholi imibimbi futhi uphucwe izinyawo ballerina. Njengoba izwe lonke nomphathi lesifanele amandla uhlelo ayengase avele sumo? Mangisho ukuthi karate Sumo livela endulo. Lapho kukhulunywa ngaye okokuqala ke kunezinhlobo ezingaphezu kuka-2000 edlule. Lokhu kuchaza ngokuchichima ezinganekwaneni zasendulo elihlobene ne umzabalazo. Khona-ke ukubaluleka ukulwa yayinkulu, ngoba winner ungumbusi waleli zwe, noma ngisho okuthiwa onkulunkulu. Nakuba ilungelo ukuba umsunguli we-wrestling sumo uthi kwamanye amazwe, amaJapane namanje bakubheka njengodumo bebodwa. Kwaba kakhulu sumo wrestling iqukethe amasiko.
Ingabe ikhona esiphezulu othanda ukulwa
Ingabe ikhona isisindo izindinganiso wrestling sumo? Abaningi ngoba abantu basakholelwa ukuthi uma kungekho ukulawula noma yini ayithandayo, bese singaya e sumoists. Ngithanda unomphela sixoshe kahle lezi zinkolelo - umuntu sengingene othola imali esongela ukuphila khilogremu, abakwazi ukuzivumelanisa ukulwa. Ngakho kubalulekile ukuba athole isisindo ngendlela ehluzekile. By the way, akuzona zonke sumo wrestling sinzima: I-izigaba isisindo ube sumo. Ngakho-ke akuyona lemali kodwa izinga nokujula yolwazi. Elikhulu kunawo wonke wathola iqhawe eMelika. Lapho ukukhula eziqinile 2 no-3 imitha isentimitha ukala 313 kg. Umuntu ubengacabanga ukuthi ulwa nguye esinganqobeki! Kodwa impilo yabo isisindo enjalo it yisiphi i senze, ngoba isisindo umzimba okweqile kuthinta isimo kwesibindi inhliziyo nezinso. Kuqala ethuthuka samathambo, sikashukela nomfutho wegazi ophezulu. I-Japanese zihlukile enempilo, kungani futhi siphilele okuyisilinganiso seminyaka engu-82, kodwa sumo wrestlers zivame neze ukuphila kuze 60. Ngemva natrenirovannosti ngokomzimba akuvamile uthola kanye ngokweqile. I-Japanese futhi abantu elinganisiwe kakhulu, ngoba ngemuva kokuphela ezemidlalo wakhe wokuziphilisa, okuyinto, by the way, ngesikhathi wrestling sumo kungenzeka eminyakeni nje ngaphansi 35, wabuyela ukudla okuncane, ngokugcina elinganiselayo ezemidlalo imithwalo. Ngeminyaka embalwa nje, bachithile yabo isisindo okweqile. Uma ubheka i-wrestling isisindo sumo bheka okunomsoco professional, uzoboniswa ukuphambuka esikhulu kuyinsakavukela. Ngakho, umzimba mass index sumo wrestling kuyinto 2.5 ephakeme izikhathi kunomuntu enempilo. Ukuze sibe nalobo ifomu ezinjalo, kudingeka udle ukudla ekhethekile futhi silondoloze enqunyiwe abasubathi yokuphila. Kodwa eyeqisayo azisebenzi lapha, ngoba sumoists ikhula ngesisindo akuyona ukumuncwa mass elikhulu ukudla nge predominance fat.
Indlela yokuthola isisindo kahle
Umbuzo Kungase kubonakale kungavamile, ngoba abezindaba e kutshalwa umzimba ogcwele sabasincane lokugijima hhayi ukuthuthumela emphethweni, kodwa sumo wrestlers musa ibukeke abantu abavamile ne isisindo okweqile. Bahlakaniphile, eziqinile futhi esebenzayo. Okudingekayo ukuze umbuso kosuku sumo esiqinile, kodwa into ngalokwanele okusikhumbuza ukuphila kwansuku zonke ngendlela enkulisa. Kuyaqondakala, ngoba sumo wrestling kwesisindo ngisho simple. Ngaphezu kwalokho ukusula inani ukudla bona sibeke isikhathi esanele sokulala. Uma uthi nhlá, kubonakala sengathi nakhu - iphupho elimnandi izinyo futhi Ukudla abathandi! Kodwa izinto azinjalo elula. Sumo wrestlers ukuthatha ukudla kabili ngosuku, kokubili izikhathi ngaphambi kokulala, njengasezulwini lekhalori iphupho ugxile ngokushesha. Ukuhlonipha wena Umqeqeshi we-sumo yakho wrestling ayikwazi ezimathonsi udle ibha ushokoledi noma ukuchitha kusihlwa phambi TV nge iphakethe esithosiwe, ngoba imenyu ekhethekile, igxile ekuqongeleleni fat umzimba, kodwa isisindo is ngokulinganayo basakaza, idliwe amafutha kufanele kube lesifanele. Ngakho, ngosuku wrestlers yakhe ziqale Amazing eside esiswini esingenalutho. Izincwajana zemininingwane Uthatha amahora 4 kuya ku-6, futhi eyinkimbinkimbi ke bukhulu njengobubanzi ukuthi we dancer. Ngombandela, lo msebenzi kufanele ukusheshisa umzimba futhi ashise amanoni, kodwa empeleni kuholela ukwehla izinga umzimba ukuthi umzimba ubona njengoba smart alamu bese uqala ukuba zigcinelwe fuel esizayo. By the way, kungase kuthathe inothi kanye neminye amantombazane abazitika ibhulakufesi futhi akakwazi ukulawula inani ukudla washisa, ngakho udla ngesikhathi sekhefu. Ngemva Amazing wrestling kwakusihlwa, nge ikhalori ukudla akufanele iwe ngezansi kilojoule ayizinkulungwane 10! Lokho eyodla sumo wrestling kufanele kudle inani lansuku zonke abadala ayisishiyagalombili! Ngemva kwasemini, udinga ukulala 3-4 amahora, ukuze umzimba iye kwadingeka isikhathi ukuhumusha kilojoule bamamukele amafutha. Ukuvuka, sekuyisikhathi ukuqala yesibili lizilolonga. Bese enye kilojoule ayizinkulungwane 10 eyodla futhi ubuthongo.
nezinjabulo Pleasant ukudla
Kodwa wachaza isimiso sansuku zonke akusho ukuthi ukulwa kufanele uphushe ukudla emlonyeni wakhe, ngisho nalapho akukho ezifiselekayo. Yebo, futhi Ukunquma ngempela ngokwabo e okukhona ukusetshenziswa akudingekile. Isisindo wrestling sumo kwenza kube nokwenzeka ukuba uphuze ubhiya futhi ngenxa ngenkathi bedla, futhi ngoba umsoco utshwala azinakugcinwa. Phakathi nesidlo, le wrestlers ukuxhumana futhi ngezinye izikhathi ukuze umlutha, bona awuboni, efana adle ingxenye enkulu. Ikakhulukazi kwesisindo ziphathwa izitsha negama ethakazelisayo - ". Yase-Chanko-nabe" Ngo iresiphi eziningi inyama, irayisi nemifino. Inyama kungcono ukuthatha imifino khuluphele futhi posytnee. Ekhaya, ungakwazi ukupheka konke okungukuthi kule esiqandisini, okungukuthi, ungakwazi ukuthatha yenkomo, inyama yengulube, yenkukhu, inhlanzi kanye kwasolwandle. Egqoke inyama emabhontjisi nokunamathisela namafutha Sesame, futhi amakha unikeza u-ginger, u-garlic kanye soy sauce. Ungakhohlwa side izitsha, okuyiwona iyisitshulu irayisi nge Tofu, isitshalo seqanda, iklabishi Chinese, izaqathe, radishes kanye isipinashi. Ngeke kube engadingekile iresiphi kanye Japanese noodle nge irayisi amakhekhe, amaqanda, amakhowe futhi zasolwandle. Eminyakeni embalwa ukudla nge inkambo main - kanye Isisindo esivamile wrestling sumo ukufinyelela 150-200 kg. A isivinini imfihlo ukudayela ezikhiqizelwa lokhu kilojoule fabulous ngaphambi sokulala. Qaphela ukuthi inala izithako wrestlers musa kudle okusheshayo carbohydrate, ufulawa noshukela. Lokho lutho olulimazayo ngokuyisisekelo, bengadli, ngakho cha ngcolisa umzimba wakho futhi emva kokuphothulwa umsebenzi wakhe kalula ubuyele isisindo soqobo. Le ndlela ehlukanisa Japanese kusukela baseYurophu, abangakwazi bagawula umkhawulo inani edonsa izithelo nemifino ukuze kuzuze fries French futhi donuts nge ushokoledi.
Njengoba sekushiwo, sumo uvele ezikhathini zasendulo. Idatha yokuqala lokucindezela libhekisela Maphakathi nekhulu 7th. Ngo-642 nombusi esigodlweni labetibambile umqhudelwano wrestling yokudumisa inxusa-Korean. Lo mqhudelwano kwaba sibonga impumelelo Umzabalazo umbukwane ngokomzwelo, ngakho ukusetha mkhuba futhi iphatha yonyaka kuze kube sekupheleni komsebenzi ensimini ekwindla. Kwakheka ku indandatho ephakanyiswe noma njengoba ibizwa, Doha, ngaphandle kwe-okwakukhona ngezigxobo ezicijile. Kwakukhona imithetho. Awukwazi beat esandleni imbangi evulekile, awukwazi sihlose at amehlo nesitho sangasese. Namanje Sumo - enhle uhlobo lokulwa, ngakho kukhona kuvinjelwe chokehold. Awukwazi ukuphuthelwa izinwele, izindlebe kanye iminwe. Kodwa wavuma ngempama, ukusunduza, kubambana encenyeni mawashi, ngaphandle kwalezo ezihlanganisa isibunu. Ngo amateur sumo kangakanani nesisindo wrestling sumo, njengoba umbhangqwana ezakhiwe isisindo izincwadi. Kodwa professional wrestling isisindo amakilasi ungayazi. Into esemqoka - isisindo isilinganiso wrestling sumo: cishe zonke ngaphansi 100 kg, kodwa phezulu wrestlers division, egqoke nabazidlayo isihloko sekttori Kufanele ube mass enkulu 120 kg. Abantu abaningi, kude sumo ngokumangala, kodwa iphesenti fat mass sumo wrestling kuyafana muntu isilinganiso emgwaqweni. Ngakho, aba maningi wrestling sumo, aba maningi mass imisipha nesisindo. Sumo - umdlalo, okuyinto ayiboni ukulinganiselwa, ngakho uthole kakhulu ngalokhu futhi wonke umuntu can.
yokuphila umehluko wemisindo nemiqondo yamagama
Esibi ngemibono ukuthi azikho sumo ubude futhi mncane. Yaziwa e ezithile emibuthanweni sumo wrestling Tienofudzi lwalungenhla ngaphezu ukukhula isilinganiso. Akukho fighters dimensionless. Noma kunjalo, umuntu enesisindo esingaba amakhilogremu angu-200 noma ngaphezulu akunakwenzeka ukuba bakwazi ukulwa ngaphandle Ukuphelelwa kanye arrhythmia. Isisindo esivamile a wrestling sumo ikude azisholo ukuthi "uphahla", ne fighters "ukukhanya" esingcono phezu heavyweights ngoba maningi zeselula lobuchwepheshe ngaphezulu. Emlandweni impi ephawulwe, lapho wrestling Maynoumi wachitha Konisiki roll ngokumelene fighter ngubani kabili isisindo sakhe. Kakhulu ezinkulu sumo wrestling nomkhawulo arsenal kwabo amasu, ke ubhekene uyisicefe efana ukujuluka ngokweqile nokwephuza. Ngo sumo amateur is hhayi ku pair bukhomba abameleli kuzo ezahlukene isisindo amakilasi futhi has division lalo.
Oxhumana karate kuhilela wrestlers ezimbili nsuku professional noma amateur. sumo Professional ngalesi umcimbi emibalabala iqhaza akhethiwe heavyweights bomlilo. Zazingekho abesifazane phakathi fighters. Ezemidlalo Sumo kungenziwa akhiwa ukulwa yamaGreki namaRoma, njengoba amasosha ehlukaniswa isisindo, angene mncintiswano. By endleleni, le sumo wrestlers okuqala ayengelona Samurai noma ronin abanentshisekelo imithombo eyengeziwe imali. Ekhulwini le-17-ke eqoshiwe 72 okukakhenoni Ihora Sumo esekelwe imicikilisho yokusebenzelana engcwele izimpawu saphezulu. Kusukela kusukela nesikhathi nesenzakalo babe sumo wrestling uhlobo lwabantu eduze umbusi, futhi ngenxa yalokho igcinwe ngaphansi kwesandla sikahulumeni.
Futhi kuyakufanelekela it
Ngempela, uma kukhona uhlamvu iqiniso ukuba wrestling sumo? Ingabe kuyazuzisa ke ukuze isisindo sakhe sithi, ukuba ninyathele emhlabeni namazinga ubuhle, give up ithuba kukhanye a bikini ogwini? Ngempela, sumo sekuyisikhathi eside saphela ezemidlalo kuphela leduna namanye amazwe uya umusa abesifazane. Sumo has a lot of imithetho: ekulweni anikwazi ukuza ndawonye fighters of Haye zakubo. Sumo wrestling ibhizinisi kuhle imali eningi, ngakho kukhona ubuncane abathintekayo kungaba sicebile ngempela. Uma sibona ifomu Ngokwesilinganiso, ngonyaka esigabeni eliphakeme we wrestling, olubizwa nangokuthi yokozuna, ukulwa nezinkampani zangaphandle engenile okuningi, kanye footballer esezingeni lomhlaba. EJapane, sumo wahlanganyela isibili nenzuzo, njengoba nje labetibambile lapha elwisana ochwepheshe.
wrestling Sawubona angengene dohyo uncollected. Ucabangela yonke imininingwane. Ngisho kwekhanda ekhethekile abe sumo wrestlers. Izithombe wakhe ovela engela eduze kuqinisekisa ukusebenza nobuhle. Lokhu kwekhanda libizwa Takayama, selithambile igalelo ka temechku, okuyinto cishe akunakugwenywa ukuwa. By the way, fighters akuvunyelwe ukuba ukushayela imoto. Ngaphezu kwalokho, imoto zitha sina ukulinda, ezifana ukumiswa, okulingana ukulahlekelwa okukhulu isikhundla. Ngokuvamile fighters uhambe ngetekisi. Ngaphezu kwalokho, kukhona imigoqo khona izizwe ezemidlalo. A wrestling kubhekwa kowezizwe, ngokungagcini nje ngokubashumayeza ubuzwe, kodwa ngo-Abrahama.
uqhuba amasu Duel efanayo umoya kanganani esiveni setfu, njengomuntu ocebile isiko, egcwele inhlonipho abaphikisi. Kodwa namanje ngempela ongaziwa ukuze ubone ukuthi amantombazane Russian ezithakazelisayo ngempela, khetha lokhu namanje ezingavamile ngenxa yokucabanga yethu yezemidlalo. Kufanele ingachibiyela ukuqonda abantu abaningi, sumo wrestling ngokushesha: sumoists hhayi ukulwa. umzabalazo wabo oncomekayo, umgomo umdlalo - ibenze isitha aphume umngcele Doha. Lose omunye nalowo othinta phansi nanoma iyiphi ingxenye yomzimba ngaphandle izinyawo. Svetlana Panteleyev ngokuphelele singahlangabezani imibono mayelana kangakanani nesisindo wrestling sumo. I amakhilogremu Svetlana 75 ngesikhathi ukukhula 170 ngamasentimitha, okungukuthi isisindo evamile. Lapha futhi sidilike eyeqisayo ukuthi kukhona amadoda fat sumo. Svetlana wafika mdlalo we-judo ne nobuciko bokusina. Sumo bayabukana sengathi bafuna ukuhleka ekuqaleni, bese ukusivumela, kwaba imizwa kushisa kakhulu. Svetlana ingaphandle imithetho bese ugcine ukuma ngosizo umsoco ofanele: amaprotheni ngaphezulu ukwakha imisipha, hhayi ezikhuluphele.
Ubani nje nempela owayeke wacabanga ukuthi iqhawe esigcwele eziyisikhombisa zezwe Sumo kungaba ekhaya ethokomele futhi owesifazane, ukunakekela ikhaya yangempela. Kuyinto lokhu Ekaterina Keyb. Nanguya ngisesemncani khulu, kodwa usezuze okuningi, ngakho-ke ungakwazi yini ukusikhokhela ikhefu emsebenzini wakhe. Catherine kwadingeka isikhathi ukuzama isandla sakhe pedagogy kanye nezombusazwe. izithakazelo abaningi, kodwa ngaphandle abanothando sport uvele cuisine Japanese. Nakuba bahileleke ezemidlalo, Kate wakugwema ezweni, futhi manje udla ngomdlandla. Kusukela imodeli yakha Ekaterina kude, ngesikhathi ukukhula kahle eliphezulu 180 ngamasentimitha, yena ukala 138 kg. Lona evamile Isisindo esivamile wrestling sumo, ne ngisho kancane hhayi kuze kube okujwayelekile.
Umklomelo-owawina Championships European Olesya Kovalenko ngisho sumo kancane adynamic: isisindo saso singamakhilogremu kg 118 nje ngesikhathi ibambene efanayo. Nokho, akholelwa ukuthi ifomu yakhe yokulwa lapho kokubili oluqinile neselula.
Impumelelo ngokusebenzisa ukuchayeka
Emkhakheni Vula, Anna Zhigalova izenzo, okuyilona elisebenzayo futhi ngaphandle, lobeka Isisindo esivamile wrestling sumo. Lapho esekhulile 185 cm Anna ukala 120 kg. Ngiseyingane ngiphuphe ngokuba ballerina, kodwa ibala kwaba krupnovat. On uhlobo olukhethekile lokudla ayihlali, ngaphandle ngezinye izikhathi umqeqeshi kubangela kwesisindo. Amasiko wabasunguli emzabalazweni, Anna awunamatheli, ukuba angadli ngendlela efanele, nakuba has izifiso zayo ukudla. Ngokuvamile, kubalulekile ukwethula ukushiyana kwezidalwa ezithile isisindo abasubathi: Esilula bugcine phakathi 65 kg; Isisindo esivamile ku ekupha 65 kuya ku-80 kg; Heavy isisindo isigaba iqala nge kg 80 nangaphezulu.
sumoists Japanese futhi umehluko zabo
Kubantu ukhuluphele e umbono wezwe kuyadida, ngoba ngezinye izikhathi musa angena amazinga evamile yobuhle. Amasiko ocebile Japan, isimo Kuthi elula, njengoba ubuhle ebaluleke kakhulu umuntu, okuqukethwe kwayo kwangaphakathi, ikhono ukuhlanganisa ngokuvumelana nokuthuthukiswa wezemidlalo. Ngakho-ke, kufanele abantu bangase bakwazi ukudla ngokuhambisana umlando lo mdlalo. Abantu bagxile ngokuphelele le mpi, abazi kusengaphambili sumo yakho nsuku zonke isimiso nokwenza ezingeni professional, ngokoqobo ukuphila ngezithukuthuku mafomu zabasebenzi. ERussia, konkhe kwehlukile, ngoba umuntu wanamuhla angeke give up on esandleni sakhe bafulathele ukubukwa ezibucayi cafe noma izithuthi. abantu Fat avinjelwe akhetha izingubo, ukuvakashela ezindaweni zomphakathi. Ubani waphawula vacationer indoda ephelele kuyi-nightclub? Futhi ababona umdansi nge shape curvy? izintokazi yethu ungafuni ukuphuma yezinyoni, ngakho isisindo sabo sincane kakhulu ngenxa sumo okhokhelwayo. Girls bayizakhamuzi ezivamile, baphile isisindo, lapho bakhululeke, yimpumelelo ngakho hhayi kuphela emisebenzini yabo kodwa futhi ezimpilweni zabo siqu.
Capoeira - okungukuthi, ubuciko amasosha noma umdanso?
David Avanesyan: middleweight esesabekayo kusukela Pyatigorsk
Indlela ukuxhuma wathungela ingxenye imperceptible?
Su-35 Isici. I Su-35: Imininingwane, fighter isithombe. izici ngokuqhathanisa we Su-35 futhi F-22
Kletus Kessidi. Biography. Ukudlula
Seagull - Bird Coastal
Orchid Engaqondakali: ezikhulayo ekhaya
Carolina Bang: Biography, umsebenzi, impilo siqu
Indlela yokwenza cocktail
Tattoos amabili: izinhlobo kanye namaphutha eyisisekelo